धनुषामा कार्यरत नर्स भन्छिन्, “सरकार भत्ता हैन सुरक्षाको उपकरण देउ !!” - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
धनुषामा कार्यरत नर्स भन्छिन्, “सरकार भत्ता हैन सुरक्षाको उपकरण देउ !!”
स्वास्थ्य मानिसको सबैभन्दा ठूलो धन हो । स्वास्थ्य व्यक्ति मात्र हरेक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेर आफ्नो उदेश्यमा पुग्न सक्छन् । मानिसले जीवनभरि नै कसरी स्वस्थ्य रहने भन्ने चिन्तन गर्छन् । तर उनीहरुको स्वास्थ्य जिवन हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने बानीहरुको बारेमा उचित जानकारी पाउन सक्दैन्न ।
सभ्भवत अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको बारेमा थाहा नभएको नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि देश छैन होला । हाल विश्वभर कोरोनाको स‌ंक्रमण विश्वभर फैलिएको छ ।
यही ड्रेसमा सेवा दिदै दुर्गा शर्मा
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि घर भित्रै बस्ने हो भने सोच्नुहोस संक्रमितको हाल के होला ? पेसागत रुपमा म एक नर्स हुँ । हाल धनुषा जिल्लामा कार्यरत छु । देश र जनताो सेवा गर्ने रहरसँगै नेपाल सरकारको जस्तोसुकै नीति निर्देशन पनि मान्न तयार छु भन्ने कबुलसहित नेपाल सरकारको सेवालाई अंगाल्न पुगेको हुँ तर अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थकर्मीको सुरक्षाको निम्ति खेप्नुपरेको सुरक्षाको निम्ति खेप्नुपरेको हैरानीका कारण कतै मैले गलत पेशा त अंगालिन भन्ने कुराले मनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ ।
सरकारले कोरोनाको उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई १०० प्रतिशत भत्ता दिने रे , हे सरकार हामीलाई भत्ता हैन सुरक्षाका साधनहरु उपलव्ध गराईयोस । हामीलाई अहिले पैसा भन्दा सुरक्षाको खाँचो छ । जब डिउ्टी सकेर घर फर्कन्छु तब घरबेटी दिदी आँखा तरेर हेर्नुहुन्छ सायद मनमनै भाईरस त बोकेर आईन भनेर त्रसित हुनुहुन्छ होला । त्यस्को अस्पतालमा त विरामीको संख्या अत्याधिक हुन्छ वाहिरबाट कोरोना ल्याएर आई भने वित्यासै हुन्छ । वरु यहाँभन्दा अन्तै कोठा सार भन्नुपर्यो भन्नै सोच्नुहुन्छ होला । अनि नियालेर हेर्छु आफैलाई के मैले हस्पिटलमा लगाउँने पोसाकले मलाई संक्रमण हुनबाट बचाउँछ ? यसरी आफै असुरक्षित रही सेवा गर्न वाध्य हामी स्वास्थ्यकर्मीको कुरा कस्ले सुन्ने कस्लाई सुनाउने ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, भदौ ९ २०७७ १९:२८:५०